DHAGEYSO:Madaxweynaha Cusub ee maamulka Puntland oo xilkiisa la wareegay. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO:Madaxweynaha Cusub ee maamulka Puntland oo xilkiisa la wareegay.
Munaasabad ay xilka ku kala wareegayeen madaxweynaha cusub ee dhawaan loo doortay maamul goboleedka Puntland iyo madaxweynihii hore ayaa maanta lagu qabtay xarunta Madaxtooyada Maamulka Puntland ee magaalada Garowe.
Madaxweynaha cusub ee Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo Ku-xigeenkiisa Cusub Axmed Garaash ayaa maanta Xilalka kala wareegay Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Ku-xigeenkiisii hore C/xakiim Xaaji Cumar Camey.
Madaxweynaha Cusub ee Puntland Siciid C/llaahi Deni iyo Ku-xigeenkiisa Axmed Garaash ayaa 8-bishan ku guuleystay doorashadii ka dhacday magaalada Garowe oo ay ku tartamayeen 32 musharax oo isugu jiray kuwo u taagnaa xilka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa.
Madaxweynaha cusub ee Puntland ayaa balan qaaday inuu la imaan doono waxqabad muuqda,wuxuuna shacabka ku nool deegaanada Maamulka Puntlan ka codsadya inay la shaqeeyaan maamulkiisa curdunka ah si uu wax badan nolosha Bulshada ugu soo kordhiyo.
Madaxweynaha cusub ee maamulka Puntland ayaa sheegay in dhamaan qaybaha kala duwan ay ku wada shayn doonaan waxa uu sharcigu qabo isagoo sheegay in cidii danbi gasha aan looga turayn ciqaabta ay mudan yihiin.
Wuxuuna toosta ka xariiqay inay ciidamada amaanku heli doonaan mushaaraadkooda isagoo laamaha canshuuraha ka dalbaday inay sahqooyinkooda laba jibaaraan
Madaxweynihii hore ee maamulka Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas oo maanta isaga iyo ku xigeenkiisu ay xilka wareejiyeen ayaa sheegay inuu talo iyo tusaale wanaagsan la wadaagi doono maamulka Badalay wuxuuna sidoo kale cafis waydiistay shacabka iyo masuuliyiintii ay isla soo shaqeeyeen.
← Baarlamaanka Soomaaliya oo Ansixiyay xeerka wax ka badalka hanti dhowrka guud ee Qaranka
3 eedeysane oo loo haysto weerarkii Westgate →